Ihowuliseyili FEELM Won iF Design Award 2020 uphawu lwetekhnoloji yoyilo. Umzi mveliso kunye nabenzi | NGCONO
FEELM Tech Vidiyo
Imfihlelo yokuNambitha kakhulu
UKUZIVA ngaphakathi kwiNkqubo
I-FEELM Won iF Design Award 2020 itekhnoloji yoyilo lobugcisa.
Ngomcimbi wokusingqongileyo we-e-cigarettes ofumana inkxalabo nangakumbi, ziindaba ezimnandi ukuba abanye abavelisi bayithatha nzulu ekusebenzeni kwabo. Iphepha le-E-cigarette elilahlwayo, ophumelele imbasa ye-2020 iF, ngumsebenzi we-FEELM, uphawu lwetekhnoloji yeatomization.
Imveliso ye-FEELM inephepha elitsha elinobuhlobo, eliphucula ukuthotywa kwinqanaba lokumangalisa le-76% yevolumu xa kuthelekiswa neeplastiki eziqhelekileyo. Kwakhona, uyilo olujikelezayo olunemilinganiselo emininzi lubonakaliswa ngococeko kunye nemisebenzi yentlalo. Umaleko ongaphandle osetyenzisiweyo womlomo unokunqunyulwa ngaphambi kokuba udluliselwe kubasebenzisi abali-15 abalandelayo. Olu luyilo lukhusela impilo yakho kwaye lusasaza umbono wokhuselo lokusingqongileyo ngelixa uhlala nabantu abatshayayo abantu abadala.
I-DESIGN AWARD lukhuphiswano oludumileyo lwehlabathi kwimveliso, ukupakisha, uyilo, uyilo lwenkonzo, njl. Okokuqala kunikezelwa ngo-1953, yiyolelona tywina lakudala elizimeleyo loyilo emhlabeni,uphawu lweempumelelo zoyilo ezijolise kumandla oyilo loyilo.
I-FEELM ibonelela ngetekhnoloji yokufudumeza enobuchule obukhethekileyo kwiinkqubo zepod ezivaliweyo. NJOY, RELX, HEXA, Haka, VAPO, Alfapod, kunye nezinye iimveliso zilayishwe ngetekhnoloji ye-FEELM. Umthamo wentengiso yemidumba ene-FEELM ngaphakathi ugqithile kwi-1 yezigidigidi.
Kuyafana neVaporesso kunye neCCELL, FEELMis icandelo elizimeleyo leshishini leShenzhen SMOORETechnology Limited. Kukho iingcali ezingaphezu kwama-400 kwiZiko loPhando lwe-SMOORE, elinamalungelo awodwa omenzi wechiza ayi-1600.
Ukuvalwa kweVape eMelika nakwindawo ejikeleze ...
Ukuvota iirhafu eMelika naseAro ...
I-Indiya: IiVapers ziya kuqhankqalaza nge-1 kaSeptemba ...
Ukuvota kolutsha kunqumle iipesenti ezingama-29 ngo-2020, iCDC Sur ...
Ukuphuculwa kwesisombululo sePod
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Imephu yendawo - AMP Iselfowuni
Iicigarete zobushushu, Isigarethi soLwelo esiTywala, Newport E umdiza, Epen, Ukutshaya enye indlela, Ipakethe yeBlister ye-cigarette,